Masinina saron-tarehy, mpanamboatra maska ​​tarehy - Frand
momba ny antsika momba ANAY
XIAMEN FRAND INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD miorina ao amin'ny rihana fahatelo, No.130 Building Jiapin Indutrial Park, Guan Kou Zhong Road, Jimei District, Xiamen Fujian, China. Niditra tao amin'ny indostria izy nandritra ny 15 taona. Izy io dia orinasa ara-tsiansa sy ara-teknolojia maoderina natao manokana amin'ny fikarohana namboarina sy ny fampiroboroboana ny fitaovana feno fahendrena avo lenta, automatique integrated automatique ary ny fampiharana ny rafitry ny robot indostrialy. Amin'izao fotoana izao dia manana toha-pamokarana efatra R&D izy ary mihoatra ny 60 patanty.
Ny orinasanay dia manarona sehatra lehibe dimy an'ny angovo vaovao, ny faritra misy ny fiara, ny elektronika marina, ny indostrian'ny fitaovana sy ny hidin-trano ary ny rafitry ny orinasa manan-tsaina. Ny fitaovana dia naondrana tany Alemana, Etazonia, Japon, Thailand, India, sns. Izy io dia manana tobim-pamokarana fikarohana sy fampandrosoana efatra ary mihoatra ny 60 patanty.
Masinina masom-panafody fitsaboana feno
Masinina sarom-panafody ara-pahasalamana feno tsy misy milina fanamafisam-peo
Machine Machine Clamp FRAND-H-14
Fanasokajiana sy toetra mampiavaka ny masinina sarontava
Masinina vatan'ny maska ​​famokarana mandeha ho azy feno, ao anatin'izany ny famahanana, ny fantsom-bozaka vita amin'ny plastika ...
Mampiavaka sy fenitra ny masinina sarontava trondro
Ny saron-trondro dia tokony hahatratra ny fenitra EU en149: 2001 P3. Ampiasaina indrindra hisorohana ny f ...
Safidio ny masinina sarontava dia tokony ho fantatrao ireto teboka manaraka ireto
Amin'izao fotoana izao, mihamaro ny olona mahita ny tsenan'ny sarontava miaro, ary koa mahita ny fironan'ny futu ...
Masinina maska ​​feno fiara feno tsy misy milina fanamoriana
Masinina maska ​​feno fiara feno tsy misy milina fanamoriana ...
Masinina mihodina fantsom-pifandraisana feno masom-bava ...
Masinina maska ​​fitsaboana fiara feno ...
Masinina vatan'ny maska ​​feno famokarana mandeha ho azy, ao anatin'izany ny famahanana, ny fantsom-plastika vita amin'ny fantsom-boaloboka, ny fisafidianana an-tsehatra, ny fusion ultrasonika, ny fikolokoloana sns., Avo dia avo ny famokarana, afaka mamokatra 1-200 isa-minitra. Ny lalàna mifehy ny hafainganam-pandehan'ny fiovam-po matetika ...
Ny saron-trondro dia tokony hahatratra ny fenitra EU en149: 2001 P3. Ampiasaina indrindra izy io mba hisorohana ny vovoka indostrialy sy setroka vy faran'izay tsara mandritra ny fiasan'ny welding. Maherin'ny 99% amin'izy ireo no manana fahombiazan'ny filtration, izay mety kokoa amin'ny tontolo mando sy mafana na miaro amin'ny akanjo maharitra lava; I ...
Amin'izao fotoana izao, mihamaro ny olona mahita ny tsenan'ny sarontava miaro, ary koa mahita ny fironana amin'ny fampandrosoana ho avy. Tena lehibe ny tsena. Mihamaro ny olona misafidy ny hividy fitaovana mekanika ho lasa mpanamboatra sarontava. Manana ireto fotoana manaraka ireto ve ianao handinihana ny safidinao? ...
Mamorona ny ho avy amin'ny faharanitan-tsaina.
Tsy misy toa ny mahita ny valiny farany amin'ny masonao manokana.
Fahazoana boky sy torolàlana maimaimpoana
milina fanaovana sarontava, masinina mpanamboatra sarontava tarehy, milina fanaovana maska ​​tsy tenona, milina clamping hosotra, milina fanaovana sarontava tarehy tsy tenona, masinina fanaovana maska ​​tarehy,